Xayiraada socdaalka ee Jamaica ee UK ayaa la qaadayaa laga bilaabo Maajo 1
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Xayiraada socdaalka ee Jamaica ee UK ayaa la qaadayaa laga bilaabo Maajo 1
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Sabtida May 1, Jamaica waxay dib u furi doontaa xuduudaheeda booqdayaasha caalamiga ah ee ka imanaya Boqortooyada Ingiriiska
Mamnuucida ayaa keentay safarka u dhexeeya Jamaica iyo UK ilaa ha
Dhowr waddan oo adduunka ah ayaa sidoo kale lagu qasbay inay hirgeliyaan mamnuucyo la mid ah kuwa safarka
Tan iyo markii dib loo furay xuduudaheeda bishii Juun ee la soo dhaafay, Jamaica waxay soo dhaweysay ku dhowaad 1.5million soo booqdayaal ah
Xayiraadda safarka Jamaica ee Boqortooyada Ingiriiska (UK) ee la qorsheeyay inay soo afjaranto berri, Abriil 30, lama dheereyn doono. Tani waxay ka dhigan tahay in xayiraadda, oo loo sameeyay qayb ka mid ah tallaabooyinka ku xusan Sharciga Maareynta Khatarta Musiibada ee Jamaica, la qaadi doono laga bilaabo Maajo 1, 2021.
Isaga oo ka hadlaya ahmiyada xayiraada laga qaaday, Wasiirka Dalxiiska, Mudane Edmund Bartlett wuxuu yiri, “Sabtida May 1, Jamaica waxay dib u furi doontaa soohdimaheeda martida caalamiga ah ee ka socota Boqortooyada Ingiriiska. Tani waxay awood u siin doontaa albaabbada muhiimka ah ee Heathrow iyo garoomada Gatwick, si ay u helaan transit-ka rakaabka soo socda oo si buuxda u waafaqsan baratakoolka caafimaadka iyo badbaadada ee looga baahan yahay safarka caalamiga ah. ”
Xayiraadda ayaa hakisay safarkii u dhexeeyey Jamaica iyo UK oo joogsadey waxaana loo sameeyey qayb ka mid ah dadaalka jasiiradda ee lagu yareynayo faafitaanka COVID-19. Dhowr waddan oo adduunka ah ayaa sidoo kale lagu qasbay inay hirgeliyaan mamnuucida safarka ee la midka ah marka laga reebo tallaabooyinkooda maareynta COVID-19. Si kastaba ha noqotee, markii la geeyay adduunka oo dhan tallaallada COVID-19 waxaa kordhay kalsoonida maadaama ay la xiriirto safarka iyo dalxiiska.
“Mawqifka Jamaica ee waqtigan waa mid muhiim ah marka la eego furitaanka xilliga xagaaga ee dalxiiska iyo runti, muhiimada ay leedahay in la caawiyo qurbajoogta, gaar ahaan macaamiisha xoogga leh ee Ingiriiska ee had iyo jeer jasiiradda yimaada. Qaadista xayiraada ayaa sidoo kale ka soo horjeedda asalka barnaamijka talaalka ee la wanaajiyay ee UK iyo xaqiiqda ah in ku dhowaad 50% dadka degan UK ay heleen qiyaasta labaad ee talaalka. ”
Tan iyo markii dib loo furay xuduudaheeda bishii Juun ee la soo dhaafay, Jamaica waxay soo dhaweysay ku dhowaad 1.5million booqdayaal ah iyada oo loo marayo hab-maamuuska adag ee caafimaadka iyo nabadgelyada ee jasiiradda.
Furitaanka xuduudaha ayaa muhiim u ah macnaha kaliya maahan dalxiiska Jamaica ee dalxiiska Caribbean, maaddaama in badan oo dalalkan ka mid ah ay ka faa'iideystaan ​​inay uga sii gudbaan Jamaica muwaadiniinta Ingiriiska iyo Yurub.
Waxaa muhiim ah sidoo kale ka soo horjeedka asalka wicitaankii dhawaa ee Ururka Dalxiiska Caribbean-ka oo ku booriyay dib u eegis lagu sameeyo kala soocida dalalka Caribbean-ka ee UK; marka la eego xaqiiqda ah inaan haysanno heerarka dhimashada ugu hooseeya iyo heerarka soo kabashada ugu sarreeya iyo maareynta ku dayashada mudan ee COVID-19, ”ayay raacisay Wasiir Bartlett.